बिरामीको मुुटुमा कोरोनाले कसरी गर्छ हमला ? पहिलाभन्दा ५० प्रतिशत बढी खतरनाक हेर्नुहोस - समृद्ध नेपाल
बिरामीको मुुटुमा कोरोनाले कसरी गर्छ हमला ? पहिलाभन्दा ५० प्रतिशत बढी खतरनाक हेर्नुहोस
यसबारे फार्टिस अस्पतालका अध्यक्ष डा. अशोक शेठले भने म्युटेन्ट भाइरस अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी संक्रामक भएको छ । अर्को धेरैजसो युवा जागिर र कुनै आवश्यक कामका लागि बाहिर निस्किरहेका छन् । यसैकारण उनीहरु संक्रमित हुने सम्भावना पनि बढिरहेको छ । त्यसैले पनि यसपटक संक्रमितमा युवाको संख्या बढी छ ।
डा. सेठले थपे दुर्भाग्यवश यो भाइरसले मानिसहरुको मुटुको गतिलाई पनि हानी पुर्‍याइरहेको छ । यसले मुटुमा रगत जम्ने समस्या पनि बढाउन सक्छ । यो रगत फोक्सो र धमनीमा पनि जम्न सक्छन् । यस्तो हुँदा बिरामीमा हृदयघातको सम्भावना निकै बढ्ने गर्छ ।
डा. सेठका अनुसार कोरोनाका कारण मुटुको मांसपेशी कमजोर हुने गर्छ । मुटु सुन्निने भएकोले यस्तो हुन्छ । यसका कारण हार्ट फेलियर रक्तचापमा समस्या र मुटुको धड्कनको गति छिटो र ढिलो हुन थाल्छ । फोक्सोमा रगत जम्ने भएका कारण मुटुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ । यस्तो समस्या युवामा बढी देखिएको छ ।
लकडाउनको मौका छोपेर व्यापारीले मनोमानी रुपमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि !
उदयपुरको बेग्ला बेग्लै दुई ठाउँमा आगलागी हुदा चार घर जलेर खरानी !
बच्चा चोर्दै गर्दा झापामा एकजना पक्राउ !
निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा ४१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक !
कोरोना विरुद्ध परीक्षण भइरहेको एउटा चिनियाँ खोपको मूल्य तोकियो कति पर्छ जन्नुहोस !
भारतीय महिला माथि प्रहरीलाई शंका लागेर चेकजाँच गर्दा यस्तो भेटियो !
दुलाहाको घर भित्रिन नपाउँदै बेहुलीको कोरोनाले लियो ज्यान !
इन्डोनेसियाको भूकम्पले मान्छेको भागदौड मच्चियो घरहरु भत्किए !